ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ NLD နှင့် ဂငယ်ကွေ့
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လွတ်လပ်တဲ့ အာရှအသံမှာ ပြောသွားတယ်။
“တကယ်ပဲ အသုံးချခံရတယ် ဆိုရင်တောင်မှ တိုင်းပြည် အတွက် အသုံးချခံရတယ်ဆိုရင် မနှစ်မြို့စရာ အကြောင်း မရှိပါဘူး၊ ယုံကြည်ချက်အတွက် ဆက်လုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်”
အာရ်အက်ဖ်အေက ထုတ်လွှင့်တဲ့ လူထုနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမေးအဖြေကဏ္ဍက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အမေးအဖြေတွေကို နားထောင်ကြည့်ရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ကျနော်တို့ ထင်ထားခဲ့သလောက် မရိုးသားဘူးဆိုတာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ မေးတဲ့လူတွေကလည်း “တိုင်းပြည်အတွက် အသုံးချခံရတာ” မျိုးကိုတော့ ဘယ် စိုးရိမ်ပူပန်ပါ့မလဲ။ စစ်အစိုးရအကျိုးအတွက် အသုံးချခံဖြစ်သွားမှာကို ပူပန်လို့ မေးမှန်းသိသိနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တယောက် အရွဲ့တိုက်ဖြေကြားတယ်လို့ ကျနော်တော့ ယူဆပါတယ်။
အလားတူပဲ။“ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ တွေ့ဆုံစဉ်က နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသတဲ့လား”လို့ မေးတဲ့အခါ တိုက်ရိုက်မဖြေဘဲ ဝေ့လည်ကြောင်ပတ် ဖြေဆိုထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ တချို့ မေးခွန်းများကို ဖြေကြားရန် အခြေအနေမရှိသေးလို့ မဖြေကြားနိုင်တာကို နားလည်နိုင်ပေမယ့် ဝေ့လည်ကြောင်ပတ်ဖြေတာမျိုးကို ကျနော့်အနေနဲ့ နည်းနည်းလေးမှ သဘောမတွေ့ပါဘူး။
တခါ ပဲခူးခရီးစဉ်အတွင်းမှာလည်း “ ဦးအောင်ကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု”တွေအကြောင်း လူထုသိချင်ကြမှာကို သိပေမယ့် ထုတ်ပြောရန်အချိန်မကျသေးဘူး။ ဘာမှ မသေချာသေးတဲ့အချိန်မှာ လူထုကို မျှော်လင့်ချက်အမှားတွေ မပေးချင်တဲ့အတွက် ထုတ်မပြောသေးတာလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောခဲ့ပါတယ်။ တဖက်မှာလည်း ဦးသိန်းစိန်နဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေကို ကျေနပ်ဝမ်းမြောက်မိတယ်လို့ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ဘာတွေဆွေးနွေးတယ်ဆိုတာ ပြည်သူကို လျို့ဝှက်ထားပြီး တဖက်မှာလည်း အပြုသဘောဆောင်တယ်၊ ဝမ်းမြောက်မိတယ် စသဖြင့် ပြောနေတာကရော ပြည်သူလူထုကို မျှော်လင့်ချက်တလွဲတွေ ပေးရာမရောက်ဘူးလားလို့ တွေးစရာ ရှိပါတယ်။ ဘာဆွေးနွေးတယ်ဆိုတာကို ထုတ်မပြောဘဲ လူထုကို ထောက်ခံဖို့ အဆင်သင့် ပြင်ထားခိုင်းတာကလည်း သိပ်ပြီး နည်းလမ်းမကျလှဘူးလို့ ထင်တယ်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတုန်းက ပြည်သူကို ဘာမှ လျို့ဝှက်မထားဘူး။ အကုန်ချပြပြီး လူထုထောက်ခံမှုကို ယူခဲ့တာပဲ။ ကျနော့်အမြင်တော့ ဒေါ်စုဟာ မလိုအပ်ဘဲ တကိုယ်တော်လူစွမ်းကောင်းဝါဒကို ကျင့်သုံးနေတယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဒီတခေါက် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်က လွတ်မြောက်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာ သူမရဲ့ တချို့သော လုပ်ရပ်တွေကြောင့် ဒီမိုကရေစီအရေး ထောက်ခံသူတွေအကြား၊ ပြည်သူတွေအကြားမှာ ရှုပ်ထွေးမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရပါတယ်။
(၁) နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကျစဉ်က ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာစာတမ်းကို ထောက်ခံခဲ့ပြီး အကျယ်ချုပ်က ထွက်လာပြီးနောက် အချိန်ကာလ အတန်ကြာလာသည့်အခါ ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာစာတမ်းကို လေသံမျှ မဟတော့ခြင်း။
(၂) စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ခုတမျိုး၊ တော်ကြာတမျိုး အမျိုးမျိုးပြောနေသဖြင့် အဖွဲ့ချုပ်က ကြေညာချက်များထုတ်ကာ လိုက်လံဖြေရှင်းနေရခြင်း။
(၃) သူမ မလွတ်မြောက်မီက အရှိန်အဟုန်ရစပြုလာသော “ဒုတိယအကြိမ် ပင်လုံညီလာခံ” ကို အရှိန်တန့်သွားစေရန် “ ၂၁ ရာစုနှင့် ကိုက်ညီသော ပင်လုံညီလာခံ” ဟု လျှောချလိုက်ကာ နောက်ပိုင်းတွင် လေသံမျှ မဟတော့ခြင်း။
(၄) အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သော နိုင်ငံရေးပြဿနာများ ဖြေရှင်းရေးထက် လူမှုကယ်ဆယ်ရေးကိစ္စများတွင် အချိန်ဖြုန်းနေခြင်း။
ဝမ်းနည်းစရာအကောင်းဆုံးအချက်မှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ ဒေါင်ဒေါင်မြည်ဟု ဆိုအပ်သော ဦးဝင်းတင်ကိုယ်တိုင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်လာပြီးသည့်နောက်ပိုင်း သိသိသာသာ အသံပြောင်းသွားခြင်းဖြစ်သည်။
ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင်က “ပါတီရှိခြင်း၊ မရှိခြင်းထက် နိုင်ငံရေးမသေဖို့က ပိုအရေးကြီးကြောင်း။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်က နိုင်ငံရေးပါတီများ တခုမှ မရှိသော်လည်း နိုင်ငံရေးရှိနေသည့်အတွက် ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ကြီးပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည့် သာဓက ရှိကြောင်း” စသဖြင့် အစဉ်တစိုက် ပြောခဲ့သူဖြစ်သည်။ သို့သော် ယခုအခါ မိုးမခနှင့် အင်တာဗျူးတွင် ဦးဝင်းတင်ခမြာ “ပါတီရှင်သန်ရေးအတွက်” ဆိုသည့်အချက်ကို တွင်တွင်ကြီး ပြောနေရသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ “ဘာလဲဟဲ့ လူ့ငရဲ” ဆိုပြီး စစ်အစိုးရရဲ့ နှိပ်စက်မှုဒဏ်ကို အနှစ် ၂၀ ကျော် ကြံ့ကြံ့ခံခဲ့သည့် ကျနော်တို့၏ သူရဲကောင်းကြီး ဘဘ ဦးဝင်းတင်တယောက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုကို ခံယူမိကာမှ ဗလောင်းဗလဲ ပြောရတဲ့ ဘဝကို ရောက်ရှာပြီဟု ရင်ထုမနာ တွေးမိပါသည်။
ဘဘရေ…. ပါတီရှင်သန်ရေးအတွက်ဆိုရင် ဦးခင်မောင်ဆွေတို့၊ ဒေါက်တာသန်းငြိမ်းတို့ လုပ်သလို ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအောက်ကို ခေါင်းလျှိုပြီး တရားဝင်သာ ပါတီဖွဲ့လိုက်ပါတော့…. ဟု ရင်နာနာနဲ့ အကြံပေးရမယ့်ပုံ ဖြစ်နေသည်။
ဒါကတော့….. လတ်တလော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်အပေါ် ကျနော်လက်လှမ်းမီသလောက် ထောက်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ဗိုလ်ကြီးဟောင်းဦးဝင်းထိန်ရဲ့ နည်းလမ်းမကျတဲ့လုပ်ရပ်တွေ၊ ပြည်သူ့အသံကို နားထောင်မယ်ဆိုတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တယောက် ပြည်သူလူထုအသံကို တကယ်နားထောင်မထောင်ဆိုတဲ့ အချက်တွေကို နောင်အလျဉ်းသင့်တဲ့အခါ ထပ်မံရေးပြသွားပါဦးမယ်။
Posted by ကိုပေါ on Friday, September 9, 2011
I am so happy to see your post again.
ကိုပေါရေးတဲ့အချက်အလက်တွေက စဉ်းစားစရာတွေပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာ အားလုံးသိပြီးသား ဖြစ်စဉ်လေး တစ်ခုကို နမူနာပြချင်ပါတယ်။
မြတ်စွာဘုရားမဖြစ်ခင် ဒုက္ခရစရိယာ ကျင့်စဉ်တွေနဲ့ ထမင်းမစား ရေမသောက် အစွန်းရောက် ကျင့်နေတုန်းက ပဉ္စ၀ဂ္ဂီတွေဟာ ဂေါတမ ဘုရားဖြစ်တော့မယ်ဆိုပြီး မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ ၀တ်ကြီးဝတ်ငယ်ပြုစုပေးကြတယ်။ အလယ်အလတ်လမ်းစဉ်ကျင့်ပြီး တကယ်တရားထူးရလို့ ဘုရားဖြစ်ပြီဆိုတော့ မယုံကြတော့ဘူး။ ၆ နှစ်လုံးလုံး ပြုစုပေးခဲ့တဲ့ ကျေးဇူးကို မြင်လို့ မြတ်စွာ ဘုရားက ငါဘုရားဖြစ်ပါပြီ တရားဦးနာလှည့်ပါ ဆိုတာကိုတောင် လက်မခံခဲ့ကြဘူး။ အဲတော့ မြတ်စွာဘုရား က ငါ့ကို ဘုရားဖြစ်တော့မယ်လို့ ထင်ပြီး သင်တို့ အရမ်း ယုံကြည်နေစဉ်ကတောင် ငါဘုရားဖြစ်ပါပြီလို့ သင်တို့ကို ပြောခဲ့သလား။ အခု တကယ်တရားသိလို့ ဘုရားဖြစ်ပြီ ဆိုတော့မှ လက်ခံပြီး တရားနာကြတယ်။ အတုမရှိ မြတ်စွာဘုရားနဲ့နှိုင်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ နမူနာပြတာပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာ စစ်အာဏာရှင် အဆက်ဆက် ကိုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်နာခံခဲ့ပြီးမှ ဘယ်လို အဂတိတရားကြောင့် လူထုကို မျက်စိလှည့်ပြီး မမှန်မကန်တွေ လုပ်မှာလဲ။ ဒေါ်စုလုပ်ငန်းစဉ်တွေကို သာမန်လူထုက နားမလည်လို့ လမ်းလွဲနေပြီလို့ ထင်ချင်ထင်မယ်။ မှားနေပြီလို့ ထင်ချင်ထင်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုပေါ ရေးထားသလို ဒေါ်စုက မရိုးသားတာ လုံးဝမဟုတ်နိုင်ပါဘူး။ နောက် ဘဘဦးဝင်းတင်လို ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အကျိုးစီးပွား ဘာမှ မလုပ်ခဲ့တဲ့သူက ဘယ်လို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုးကွယ်မှုကြောင့်မှ ဗလောင်းဗလဲမလုပ်ဘူး ဆိုတာ ကိုပေါလိုလူက နားလည်သင့်ပါတယ်။ ကိုယ့်အမြင်ကို ရေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နှိမ့်ချစော်ကားတဲ့ စကားလုံး အသုံးအနှုန်းတွေ သုံးပြီး ဝေဘန်ရေးသားထားတဲ့ သည်ပို့စ်ကို လုံးဝရှုံ့ချပါတယ်။
ရွှေဂုံတိုင် ကြေညာစာတမ်းနဲ့ ဒုတိယပင်လုံဟာ ဘယ်လောက် ခရီးရောက်မယ်လို့ ကိုပေါ ပြောရဲလဲ၊ ဒါတွေဟာ ကြေညာစာတမ်းအဆင့်မှာပဲ ရှိတယ်၊ နိုင်ငံရေးဆိုတာ ကိုပေါ စိတ်ကူးယဉ်သဘောက် မလွယ်ပါဘူး။
ကိုပေါရေ...စာတွေပြန်ရေးတာတွေ့ ရလို့ အရမ်းဝမ်းသာပါတယ်...ဒါပေမယ့် ပထမဆုံးဖတ်ရတဲ့ ပို့ စ်က ဒီပို့ စ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်တော့ ဝမ်းနည်းမိတယ်... ကျွန်မနိုင်ငံရေးကို ကိုပေါလောက်နားမလည်ပါဘူး... ဒါပေမယ့် အမေစုရဲ့ သမိုင်းနဲ့အမေစု imageတွေကြောင့် အမေစုကိုအကြွင်းမဲ့ယုံတယ်... ကျွန်မရဲ့နှလုံးသားထဲက ခံစားရတာကိုပြောတာပါ... ပြီးတော့အမေစုလို မိသားစုစွန့် ပြီးတိုင်းပြည်အတွက် အချိန်အကြာကြီးပေးဆပ်ခဲ့တဲ့သူတယောက်မှာ တိုင်းပြည်အတွက်ကလွဲပြီး တခြားဘာရှိဦးမှာလဲ.. စိတ်တွေလောနေကြတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်... တချို့ အကြောင်းအရာတွေက ဒီအချိန်မှာ ဖွင့်ပြောဖို့အချိန်မတန်သေးတာဖြစ်မှာပါ... ကျွန်မသိသလောက်တော့ နိုင်ငံရေးလုပ်တယ် ဆိုတာ ၁၀၀% ပွင့်လင်းလို့ မရပါဘူး... အမေစု နဲ့အန်ကယ်ဦးဝင်းတင် မပြောသေးတာဟာ ပြည်သူ့ ကို မပွင့်လင်းတာ မဟုတ်ပဲ သူတို့ ရဲ့ နည်းဗျူဟာပြောင်းသုံးတာလို့ကျွန်မထင်တယ်... နောက်တခုက လူမှုရေးလုပ်တာကို အချိန်ဖြုန်းတယ်လို့ ကျွန်မကတော့ မသတ်မှတ်ဘူး... ကျွန်မတို့ တိုင်းပြည်မှာရှနေတဲ့သူတွေ တွင်းနက်ကြီးထဲမှာ...ငတ်နေကြတယ်...တနေ့ တနေ့ဆေးမကုနိုင်လို့ သေဆုံးသွားရတဲုသူတွေ...ငတ်လို့ သေသွားရသူတွေမနည်းဘူး...ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ ဦးရေနဲ့လူမှုရေးလုပ်နေတဲ့ဦးရေမမျှသေးဘူး...ဒါကြောင့် အမေစုတွဲလုပ်တာကို ကျွန်မထောက်ခံတယ်...ကိုပေါရေ...နောက်ဆုံးတခုပြောချင်တာက ကျွန်မတို့ တိုင်းပြည်ကြီး ဒုက္ခတွင်းက လွတ်အောင် ကြိုးစားဖို့ က အမေစုတယောက်ထဲမှာပဲ NLDမှာပဲ တာဝန်ရှိတာ မဟုတ်ပါဘူး... တိုင်းပြည်ကလူတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်... ကိုပေါတို့ လို ပေးဆပ်နေတဲ့ သူတွေကို ကျွန်မမပြောပါဘူး... ဟိုတလောက အမေစုသတင်းတွေ ပြန့် နေတော့ တချို့ သူတွေရဲ့ ကော်မန့် တွေဘယ်လိုမှ သည်းမခံနိုင်လို့ဒီပို့ စ်ကနေပြောတာပါ... တိုင်းပြည်ကသူတွေငတ်နေပြီ အမေစုကဘာလုပ်နေတာလဲဆိုတဲ့သူတွေကို ကျွန်မက မေးချင်တယ်... ရှင်ကရော ငတ်နေတဲ့သူတွေအတွက် ဘာများလုပ်ပေးသလဲဆိုတာပါ...လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ ကန့် သတ်ထားတယ်ဆိုပေမယ့် လုပ်လို့ ရတဲ့ အတိုင်းအတာတွေရှိနေတာပဲ... ဒါကြောင့် ပြီးခဲ့တဲ့စာပေဟောပြောပွဲမှာ ဆရာချစ်စံဝင်းပြောသွားတာကို အပြည့်အဝထောက်ခံမိတယ်... တိုင်းပြည်ကြီးပြောင်းဖို့ ခင်ဗျားတို့ အားလုံးမှာ တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာ... ပြိုင်တူတွန်းမှ ရွေ့ မှာပါ ကိုပေါရေ...
Mi Tay 4,
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာ စစ်အာဏာရှင် အဆက်ဆက် ကိုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်နာခံခဲ့ပြီးမှ ဘယ်လို အဂတိတရားကြောင့် လူထုကို မျက်စိလှည့်ပြီး မမှန်မကန်တွေ လုပ်မှာလဲ။”
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှစ်ပေါင်းများစွာ စစ်အာဏာရှင်အဆက်ဆက်မှာ ဒုက္ခခံခဲ့တာဟာ သူမရဲ့ ရွေးချယ်မှု အရပါတဲ့။ ကိုယ်ကျိုးစွန့်တယ်လို့ ဒေါ်စုက မယူဆပါဘူးတဲ့။ အဲဒီကိစ္စမှာ ကျနော်လည်း သူမနဲ့ ထပ်တူ သဘောကိုက်ညီပါတယ်။ ဘယ်လိုအဂတိတရားကြောင့် လူထုကို မျက်စိလှည့်ပြီး မမှန်မကန်တွေ လုပ်မှာလဲ ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ လူတွေဟာ အရိယာမဖြစ်သေးသမျှ အဂတိတရားလေးပါးစလုံးကြောင့်၊ အထူးသဖြင့် အခုကိစ္စမှာ “မောဟဂတိ” ကြောင့် မှားနိုင်သေးတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ အဓိကကတော့ နိုင်ငံရေးဆိုတာ မိမိလုပ်ငန်းစဉ်တွေကို သာမန်ပြည်သူတွေ နားလည်အောင် ချပြ၊ရှင်းပြပြီး ထောက်ခံမှု ယူရတာ မဟုတ်ဘူးလား။ ဒီလို မဟုတ်ဘဲ ဘုမသိ ဘမသိ ထောက်ခံရတာမျိုးဆိုရင်တော့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုးကွယ်မှုသက်သက်ထက် မပိုဘူးလို့ မြင်ပါတယ်။
Anonymous (September 10, 2011 7:14 AM )
ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာစာတမ်းနဲ့ ဒုတိယပင်လုံ ဘယ်လောက်အထိ ခရီးပေါက်မလဲဆိုတာတော့ ကျနော်မသိဘူးဗျ။ ဒါတွေဟာ ကြေညာစာတမ်းအဆင့်ပဲ ဆိုတာလည်း ကျနော် လက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီကြေညာစာတမ်းဟာ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ မူဝါဒနဲ့ နိုင်ငံရေးရပ်တည်ချက်ပေါ်မှာ အခြေခံပြီး ထုတ်ပြန်ခဲ့တာလို့ နားလည်တယ်။ ဒီအတွက်လည်း ဒီကြေညာချက်တွေ ထုတ်ပြန်စဉ်က ထောက်ခံခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု ဒီကြေညာချက်တွေကို ရုပ်သိမ်းကြောင်း တရားဝင် ထုတ်ပြန်တာလည်း မလုပ်ဘဲ လက်တွေ့ လုပ်ဆောင်မှုပိုင်းမှာ နဂိုမူဝါဒကနေ ဂငယ်ကွေ့ ကွေ့တဲ့ အရိပ်လက္ခဏာတွေ မြင်ရတဲ့အတွက် ထောက်ခံသူတွေအကြားမှာ ရှုပ်ထွေးမှုတွေ ဖြစ်နေတယ်လို့ ပြောချင်တာပါ။ ဆိုလိုတာက အခြေအနေ အချိန်အခါအရ ဂငယ်ကွေ့ကွေ့ချင် ကွေ့လို့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် လူထုထောက်ခံမှုကို ရချင်ရင် သာမန်လူထုအပေါ်မှာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ လမ်းကြောင်းချပြနိုင်ရမယ်လို့ ဆိုလိုချင်တာပါ။
သူငယ်ချင်း နိုင်ငံရေးဆိုတာ အဲဒီလောက်မရိုးစင်းဘူး၊
နောက်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်လက်ထက်ကလို အင်္ဂလိပ်၊ ဂျပန်တွေကိုနိုင်ငံ ထဲကနေ မောင်းထုတ်လို့ရတဲ့တိုက်ပွဲမျိုးမဟုတ်ဘူး၊
နောက်တစ်ခု သူငယ်ချင်းစာရေးဖို့စဉ်းစားရင် ခေါင်းထဲထည့်ထားသင့်တာက
သူငယ်ချင်း အကြံပေးချက်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အဲဒီ ဝယ်သင့်၊ ဆောင်သင့်တဲ့ စကား ၂ ခွန်းမှာ...
ဟုတ်မှန်မယ်၊ အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင် နားထောင်တဲ့သူ နှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ၊ မနှစ်သက်သည် ဖြစ်စေ အခါအားလျော်စွာ ပြောသင့်တယ် လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မို့ မမှားနိုင်ဘူးလို့ ဘယ်သူပြောနိုင်မလဲ။ Public Figure ဖြစ်နေတဲ့အတွက် သူ့လုပ်ရပ်မှာ ရှေ့နောက်မညီတာတွေ မြင်ရခဲ့ရင် စစ်အစိုးရကို ဝေဖန်သလိုမျိုး သူ့ကိုလည်း ဝေဖန်သင့်တာပဲ။ သူကိုယ်တိုင်ကလည်း ပြည်သူတွေရဲ့ အသံကို နားထောင်ချင်တယ် ပြောထားတဲ့အတွက် အခု ပြည်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကျနော့်ရင်ထဲက အသံ အစစ်အမှန်အတိုင်း (ခံစားရတဲ့အတိုင်း မကွယ်မဝှက်ဘဲ) ထုတ်ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ခံတာ၊ မလက်ခံတာကတော့ စာဖတ်သူနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အပိုင်းဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။
ကိုပေါပြောတာ လက္ခံပါတယ်၊ ဆိုလိုချင်တာကို သဘောပေါက်ပါတယ်၊လူရဲ့စိတ်ဟာ အချိန်မရွေးပြောင်းလဲနေတာပါ။ ကျနော်ဒေါ်စုကို အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ အားပေးပါတယ်၊ ရှိသင့်ပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ခုအခြေအနေက ခန့်မှန်းရခက်နေတယ်။ အားမရမိတာတော့ အမှန်ပါ၊
Ko Thaw said...
ကျနော့်အမြင်တော့ ဒေါ်စုဟာ မလိုအပ်ဘဲ တကိုယ်တော်လူစွမ်းကောင်းဝါဒကို ကျင့်သုံးနေတယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။
Ko Paw, I agree with what your thinking.
ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တောင် မြန်မာပြည်အတွက် ဘာမှလုပ်မပေးနိုင်သေးတဲ့ဘ၀မှာတော့ တကယ်အနစ်နာခံ ကြိုးစားပေးနေတဲ့ အမေစုတို့၊ ကိုကျော်သူတို့၊ NLD တို့ကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ယုံကြည်ထောက်ခံပေးတာက အဝေးရောက် ဟောင်ယုံပဲတတ်နိုင်ကြတဲ့ လူတစုထက် သာမယ်လို့တော့ ခံယူမိတာပဲ ....
I think either you are just naive
or being exploited by opposition
in exile or you are sucking or working for someone who has much to lose when Daw Su work with govt.
I admire Daw Su for her "U" turn.
I think U Thein Sein is also working with her for Burma. People like you and the other suckers who
are against U Thein Sein should form alliance to keep fucking Burma, keep her in the dark, etc..
She is the only reason I am still
a Burmese, the rest of opposition
do not even have calibre to run
a sushi joint.
People like you cursed her father
U Aung San for working with British. Gen. Aung San was also
critized by dick heads who were fooled by communists. What exile
suckers want is for Burma to become
poorer and poorer till it becomes
a defacto satellite state of China or India. For me this made me more
admire Daw Su.
There isaproverb in Burmese, Dont let Burmese see before it is done. Be patience Ko paw
U-turn ကွေ့တဲ့ အဆင့် မဟုတ်သေးပါဘူးဗျာ။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ မလွှတ်ရင်နေပါဒေစတော့၊ စစ်မှန်တဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ မလုပ်ရင်နေပါစေတော့၊ ဘာဖြစ်ဖြစ် အစိုးရနဲ့ပေါင်းတော့မယ်ဆိုတာကမှ တကယ့် U-turn ပါဗျ။
ဒါဏ်ရာဗလပွနဲ့ အိုနာနေသူတွေ၊ ခရီးပန်းနေသူတွေ။ မလှုပ်မရှားနိုင်ဖြစ်နေသူတွေကို ဦးဆောင် မောင်းနှင်နေတဲ့ ဒရိုင်ဘာ တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘယ်လမ်းက ခရီးသိပ်ကြမ်းမယ်။ လိုရာရောက်ဖို့ လမ်းလွှဲ၊ လမ်းသစ်တွေကနေ သွားသင့်တယ်ဆို ပိုနားလည်ပါလိမ့်မယ်။ လမ်း ပီပီပြင်ပြင် မပေါက်သေးခင်မှာ၊ ဖောက်မယ့်ဟန်ပြပေးနေသူတွေကို တကယ်ဖောက်ဖြစ်သွားဖို့ တွန်းအားပေးဖို့ပဲရှိပါတယ်။ မဖောက်ပေးချင်နေ၊ ဘယ်လောက်ကြာကြာ ကိုယ့်လမ်းကိုယ် ဆက်ရမှာပဲ ဆိုပြီး ဘယ်တော့ ရောက်မယ်မသိတဲ့ ခရီးကိုဆက်မလား၊ ပိုသာတဲ့လမ်းဖောက်ပေးချင်စိတ်ဖြစ်လာအောင် ကိုယ်တိုင် တွန်းဝင်အားပေးဆောင်ရွက်မလား။ ကြိုက်ရာကိုရွေး။ လမ်းဖောက်ပေးအောင် လုပ်နေတယ်ဆိုတာ ကျုပ်တို့ မမြင်ရလို့ မယုံဘူးဆိုရင် မယုံချင်နေပါ၊ စေတနာကိုတော့ မစော်ကားသင့်ဘူးထင်တယ်။
ကျနော်က ကော်မန့်တွေထဲမှာ အပေါ်က စရေတွက်ရင်
၃ ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့ Anonymous ပါ၊ ကိုပေါက NLD ကို တော်တော် အားကိုးပုံရတယ်၊ ဒေါ်စု လွတ်ကာစက ပြောပါတယ်၊ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးပြဿနာမှာ အားလုံးဝိုင်းလုပ်မှာရမယ်၊ ကျမတစ်ယောက်တည်းကို အားမကိုးဖို့ ပြောထားပါတယ်၊ ကျနော်က ဒေါ်စုကို မျက်စိမိတ် ထောက်ခံတဲ့ crazy တစ်ယောက် မဟုတ်ပါဘူး၊ ခက်နေတာက `လူထုထောက်ခံမှု´ဆိုတဲ့ စကားလုံးပါ၊ အဲဒီ အရာဟာ ဘာလဲ ဘယ်လောက်ခံသလဲ ဆိုတာ သေသေချာချာ သိဖို့လိုပါတယ်၊ ဥပမာ ... ဒေါ်စု လွတ်ကာစက ရွှေဂုံတိုင် ဒေါ်စုတရားပွဲကို လာရောက်ခဲ့တဲ့ လူထုဟာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အလိမ့်ခံရလို့ ပြေးလာတဲ့ ပရိတ်သတ်လည်း အတော်များများ ပါ ပါတယ်၊ ကိုပေါလည်း အင်းစိန်မှာ ဦးစိန်လှဦးကို ၉၀ တုန်းက မဲပေးဖူးတယ်နော်၊ မဲရုံမှာ မဲပေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း မဲဆန္ဒရှင်တစ်ဦးအနေနဲ့ ဘာ ဆက်လုပ်ခဲ့လဲ၊ ဘလော့ဂါ ကိုပေါ၊ မဲဆန္ဒရှင် ကိုပေါအနေနဲ့ ကိုယ့်ဆန္ဒကို လွတ်လပ်စွာ ပြောခွင့်ရှိပါတယ်၊ facebook မှာ မခင်မင်းဇော်ဆီ စာဝင်ရေးရင် ပေါက်ကွဲလာလို့ ဖုန်တက်နေတဲ့ ဘလော့လေး ပြန်ရေးတာနဲ့ အရာရာကို အပြစ်တင် မစောပါနဲ့အုံး ...
Anonymous (Sept 11, 2011 4:39 AM)
၉၀ တုန်းက အဖွဲ့ချုပ်ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ဦးစိန်လှဦးကို မဲပေးတယ်။ မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတဦးအနေနဲ့ လွတ်တော်အမတ်လောင်းတစ်ရပ်ကို၊ ပါတီတရပ်ကို သူ့ကိုယ်စား လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာအပ်နှင်းလိုက်တာဟာ အမြင့်ဆုံး ထောက်ခံမှုပေးလိုက်တာပါပဲ။ မိတ်ဆွေက ဒီ့ထက်ဘာများ ပိုပြီးမျှော်လင့်နေပါသေးသလဲ။ အဲဒီ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး တိုင်းပြည်အတွက် အကျိုးပြုဖို့က အဲဒီအမတ်၊ ပါတီ ရဲ့ တာဝန်ဖြစ်သွားပါပြီ။ ဒေါ်စုကိုယ်တိုင် ဒီမိုကရေစီကို မရအရ ယူပေးဖို့ အဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ ကတိပေးပါတယ်လို့တောင် ပြောခဲ့ဘူးပါတယ်။ (ကတိမပျက်သေးပါဘူး။ ကြိုးစားဆဲဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ လက်ခံပါတယ်။)
ဒါပေမယ့် မိတ်ဆွေအမေးရှိလို့ဖြေရရင် အဲသည် ၉၀ တုန်းက အဖွဲ့ချုပ်ကို မဲပေးလိုက်တဲ့ သာမန်ပြည်သူတွေထဲ အများစုထက် ကျနော်က အပိုဆောင်းပြီး (ငွေကြေးအရ၊ လှုံ့ဆော်မှုအရ၊ စည်းရုံးရေးအရ) ထောက်ခံပေးခဲ့တယ်လို့တောင် ကျနော်ရဲရဲကြီး ပြောရဲပါတယ်။ ဒီလိုထောက်ခံတယ်ဆိုတာလည်း ဘယ်သူ့ကျေးဇူးတင်ခံချင်လို့မှမဟုတ်ဘဲ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ နိုင်ငံရေးစနစ်တရပ် ကိုယ့်တိုင်းပြည်မှာ ပေါ်ထွန်းလာရေးအတွက် ကိုယ့်အတ္တနဲ့ကိုယ် လုပ်ခဲ့တာပါ။ နောက်တချက်က အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ရပ်တည်ချက် အများစုကို ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာစာတမ်းအထိ သဘောတူထောက်ခံခဲ့တာလည်း ပါပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောက်ခံတယ်ဆိုတာလည်း အကျယ်ချုပ်ကျနေစဉ်အထိ သူမရဲ့ အယူအဆနဲ့ ရပ်တည်ချက်ကို လေးစားတဲ့အတွက် ထောက်ခံခဲ့တာပါပဲ။
ဒါပေမယ့် ဒါတွေဟာ တခါ ထောက်ခံမိလို့ ရာသက်ပန် ထောက်ခံသွားမယ်လို့ စာချုပ်ချုပ်ထားတာမျိုးတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောဖူးသလိုပဲ... “ထာဝရလူဆိုး၊ ထာဝရလူကောင်း” ဆိုတာမရှိဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လောလောဆယ်ပြုမူဆောင်ရွက်နေတဲ့ ကိစ္စတွေမှာ တချို့ကိစ္စတွေကို ကျနော် မနှစ်ခြိုက်ဘူး။ မထောက်ခံဘူး။ ကျနော့်အမြင်မှာ ရိုးသားမှုမရှိဘူးလို့ ယူဆလို့ရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အဖြေစကားတွေကို အာရ်အက်ဖ်အေ အမေးအဖြေကဏ္ဍမှာ ကြားကြားနေရတယ်။ နောက်ပိုင်း ပို့စ်တပုဒ်အနေနဲ့ သတ်သတ်ရေးပြမယ်။ ကျနော်ဘာကြောင့် အဲသလို ယူဆရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း။
နောက်တချက် ဒေါ်စုနဲ့ အဖွဲ့ချုပ်ကိုချည်း အားမကိုးနဲ့။ ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့။ ကျနော် အစဉ် ဝိုင်းဝန်းခဲ့ပါတယ်။ ဝိုင်းဝန်းဖို့လည်း ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်ချည်းသာမဟုတ် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေ၊ အခြားနိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊ တိုင်းရင်းသားတွေ အားလုံးက ဝိုင်းဝန်းထောက်ခံဖို့ ကြိုးစားခဲ့ကြတာချည်းပါပဲ။ ပြဿနာက ဒေါ်စုက တကယ်တမ်းမှ အဝိုင်းဝန်းမခံဘူးခင်ဗျ။ (အတိတ်မှာ ထောက်ပြစရာ ဖြစ်ရပ်တွေ ရှိပါတယ်။ ထားတော့)
လောလောဆယ်မှာ သူက တကိုယ်တော် တာဝန်ခံပြီး လုပ်နေတယ်။ လူတွေရဲ့ ထောက်ခံမှုကို ဝိုင်းဝန်းမှုကို လိုချင်ရင် လူတွေကို လမ်းကြောင်းတော့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ချပြရမှာပေါ့။ သူပြောပြောနေတဲ့ ပွင့်လင်းမှု၊ မြင်သာထင်သာရှိမှုတွေ အခုဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲ။ အခုတော့ သူ့ စီအီးစီတောင် သူဘာလုပ်နေသလဲ ကောင်းကောင်းသိရဲ့လားမသိ။ အရင်တုန်းက အင်တာဗျူးတွေမှာ အင်မတန် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောတတ်တဲ့ ဦးဝင်းတင်လို လူမျိုးတောင် အခုတော့ အင်တာဗျူးတွေမှာ ဝေဝေဝါးဝါး ပြောရတဲ့ အဆင့်ကို ရောက်နေပြီ။ ခင်ဗျားတို့ အဲဒါတွေကို သတိမထားမိရင် နောက်ပိုင်းကျမှ အင်တာဗျူးတခုချင်း ကျနော်ဆွဲထုတ်ပြပြီး ပို့စ်တွေနဲ့ ထောက်ပြပေးမယ်။
Alvin Aung said...
ကိုပေါရေ နိုင်ငံရေး လုပ်မယ်ဆို လဲ သေသေချာချာ လုပ်ပါ ၂၀၀၇ လောက်က တက်ကြွလိုက် စလုံး က ဖိအားပေးတော့ ပြန်ငြိမ်လိုက် အခုတခါ ဘ လောဂ် မှာ ပေါ်လိုက် ပြောက်လိုက် " ဒေါ်စု ကို သက်ရှိ လူသား ထဲမှာ လေးစားဆုံး ပြောလိုက် "......အခု ဒေါ်စု က နဲနဲ မှ မ ရိုးသားပါဘူး ပြော လိုက် ..... ကိုပြော (စော်ရီး) ကို ပေါ ရဲ့ ယုံကြည်ချက်က ဘာလဲ ဘယ်လဲ မြန်မာ ပြည်အ တွက် ဘာလုပ်ပေးချင်တာ လဲ ဘာလုပ်ပေးခဲ့လဲ ဘာလုပ်ပေးမယ်လို့ ကြံရွယ်ထားလဲ ဒေါ်စု မရိုးသားရင် ဒေါ်စု ထံ တိုက်ရိုက် စာပို့ လေ ဒါမှ မဟုတ် RFA ကနေ ဖုန်း ခေါ် ပြီး ခင်ဗျား နဲ နဲ မှ မရိုး သား ဘူးလို့ ပြော လေ ..... ဝေးလိုက်ထာ
ဆောရီးပါ။ နိုင်ငံရေးကို စောက်ချလုပ်ဖို့ ဘယ်တုန်းကမှ စိတ်ကူးမရှိခဲ့ဘူး။ ဒီတော့ သေသေချာချာလုပ်ပါဆိုတဲ့ မိတ်ဆွေရဲ့ တိုက်တွန်းချက်က ကျနော့်အတွက် အရာမထင်ဘူး။ မှန်ပါတယ်။ ဒေါ်စုကို သက်ရှိထဲမှာ အလေးစားဆုံးပဲလို့ပြောခဲ့တဲ့အချိန်က ဒေါ်စုဖက်ကလည်း ကျနော့်စံနှုန်းအရ လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိတဲ့ ဒီလို လုပ်ရပ်တွေကို မလုပ်သေးပါဘူး။
မိတ်ဆွေကို ကျနော်တခုမေးပါမယ်။ မိတ်ဆွေအနေနဲ့ သူတော်စင်အနေနဲ့ လေးစားခဲ့သူတစ်ယောက်က မိတ်ဆွေရဲ့ စာရိတ္တ စံနှုန်းနဲ့ လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိတဲ့ ကိစ္စတခုခုကို ပြုလုပ်တာကိုတွေ့ခဲ့ရင် အဲသည်လူကို မိတ်ဆွေ ဆက်ပြီး လေးစားနိုင်ဦးမလားဆိုတာပါပဲ။ ဒါဟာ ယုံကြည်ချက်နဲ့ ဘာမှ မဆိုင်ပါဘူး။ နောက်တချက်က ယုံကြည်ချက်ဆိုတာတောင် မွေးကတည်းကနေ သေတဲ့အထိ အမြဲတစေ မပြောင်းမလဲ ဆုပ်ကိုင်သွားသင့်တဲ့အရာ မိတ်ဆွေထင်နေရင်လည်း အဲဒါ မိတ်ဆွေရဲ့ ပြဿနာပဲ။ အဓိကကတော့ လောလောဆယ် ကိုယ်လုပ်နေတဲ့အရာ၊ ကိုယ်ကိုင်စွဲတဲ့ မူဝါဒနဲ့ ရိုးသားပွင့်လင်းမှုရှိဖို့က အဓိကလို့ ထင်ပါတယ်။ လူတယောက်ရဲ့ အချိန်နဲ့အမျှ အတွေးအခေါ်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဟာ သူ့ဆီကို အချိန်နဲ့အမျှ ဝင်ရောက်နေတဲ့ အချက်အလက်တွေ၊ အသိတရားတိုးတက်မှုတွေ အပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။
မိတ်ဆွေမေးခွန်းကို ဖြေရရင်… ကျနော့်အနေနဲ့ မြန်မာပြည်အတွက်၊ မြန်မာလူမျိုးအတွက် ဘာမှ လုပ်ပေးချင်တာ မရှိပါဘူး။ ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ပဲ လုပ်ပေးချင်တာပဲ ရှိပါတယ်။ ဒါဟာ အရွဲ့တိုက်ဖြေတာမဟုတ်ပါဘူး။ တကယ့် အရိုးခံအတိုင်း အမှန်အတိုင်း ဖြေကြားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်အတွက်ဆိုရာမှာ ကိုယ်နေတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းလွတ်လပ်မှ ကိုယ့်အတွက်လည်း လွတ်လပ်မှာဖြစ်လို့ အချို့ကိစ္စတွေမှာ မဖြစ်မနေမို့ အများနဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းမျှဖြစ်ပါတယ်။ ဘာမှ မလုပ်ဘဲနေလို့ရရင် အဲဒီကိစ္စတွေနဲ့ ကင်းကင်းနေချင်တဲ့လူမျိုးဗျ။ အလကား ဘာလို့ အချိန်ကုန်၊ ခေါင်းရှုပ်ခံမလဲ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်လာပြီးနောက်ပိုင်း ပို့စ်သိပ်မရေးဖြစ်တော့တာ အဲဒီအကြောင်းကြောင့်လည်း ပါတယ်။ အရင်က အိပ်နေတဲ့လူတွေပါ ကွန်ယက်ကွန်ယက်နဲ့ အုံးအုံးကြွက်ကြွက်လုပ်နေကြတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်သိပ်ပြီး ဝင်ပါစရာ မလိုတော့ဘူးလို့ ယူဆတဲ့အလျောက် ပျင်းပျင်းနဲ့ အသာလေး ဘေးမှာ နှပ်နေတာလည်း ပါတယ်။ မိတ်ဆွေအခုပြောနေသလို တိုင်းပြည်အတွက်၊ အမိမြေအတွက် ဆိုတာမျိုး ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် အလုံးကြီးတွေကို အခုလိုအတွေးအခေါ်မျိုး မတွေးမိခင်ကပဲ ပြောချင်ပြောမယ်။ အခု ကျနော့်အနေနဲ့ ဒါမျိုး ဘယ်တော့မှ မပြောတော့ဘူးဗျ။ အဲဒါ အမှန်အတိုင်းပြောတာ။
ကျနော့်မှာ ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ဂ်ရှိတဲ့အတွက် ကိုယ်ပိုင်စာမျက်နှာပေါ်က တိုက်ရိုက်ပြောလို့ရတဲ့ကိစ္စတွေမှာ ဘာကြောင့် ကြားခံတွေက တဆင့်ပြောတော့မလဲ။ အခု ဘလော့ဂ်ပေါ်က ပြောလိုက်တဲ့အတွက် မိတ်ဆွေတောင် သိသွားပြီ မဟုတ်ဘူးလား။ ဒီလောက်ဆို ကျနော့်ရည်ရွယ်ချက် အထမြောက်သွားပြီပေါ့။
Leaders are like generals in war.
A general does not have to explain his men why he needs that town or hill, he will explain that it
is important and his men have
to fight for the positions. Leaders do not need to tell followers every detail as followers (like) you are hot
heads or clueless.
Now Daw Su and U Thein Sein are acting best for Burmese inside
and outside of Burma and why are
you worrying for your NGO lepers?
I am notasoldier. Neither is Daw Aung San Suu Kyiageneral. She isapolitician. A politician needs to explain to the mass what his plans are. If not, she won’t get my support. It is as simple as that.
How can you know they are acting best for Burmese inside and outside of Burma if you don’t know what exactly they are doing? Due to blind faith?
If they are acting best for Burmese inside and outside of Burma, why should they hide it away from public?
I thought you knew it as I
thought you areasmart ass.
You asked "If they are acting
best for Burmese inside and outside of Burma, why should
they hide it away from public?"
First of all they already have
made it clear that they are now
working out together. So what
made you upset. Is your suckers
will lose their jobs working as
beggers seeking grants?
But they cannot and need not
tell all because there are
lepers in NGOs and SIG lobby groups and even opposition in
exile such as who are queueing
in camps (or flats in Yangon
to fly to Bangkok when there
are chances to relocate to 3rd
nations like Canada, Australia
and Sweden, anywhere they can
get free ride). Such people
will lose when Daw Su will
work hand in hand with army
leaders (for they are also
Burmese and I trust them
more than some grant seeking
lepers in NGOs).
That is called conflict of
interest and that is what
politics is about.
Alvin Aung ကို ပြန်ထားတာ အရွဲ့တိုက်တာ လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ အတည်ပြောနေတာပါ။ မငယ်နိုင်တို့ရဲ့ လက်ရှိအတွေးအခေါ်မျိုးကို လွန်ခဲ့တဲ့ ငါးနှစ်လောက်အထိ ကျနော့်မှာလည်း ရှိခဲ့ဘူးပါတယ်။ အခု အဲဒီအတွေးအခေါ်တွေ မှားယွင်းတယ်လို့ ကျနော့်ဘာသာ ယူဆတဲ့အတွက် မကျင့်သုံးတော့တာပါ။
Anonymous (September 11, 2011 4:03 PM),
Your comments are getting funnier and funnier. If you know me well, you won't associate me with the NGOs. :-)
By the way, their statements are as vague as SPDC's "we are going to build democracy in Burma".
Anyway, good luck with your hope. If their talk are really successful, I see there is no reason for me not to be joyous.
"မငယ်နိုင်တို့ရဲ့ လက်ရှိအတွေးအခေါ်မျိုးကို လွန်ခဲ့တဲ့ ငါးနှစ်လောက်အထိ ကျနော့်မှာလည်း ရှိခဲ့ဘူးပါတယ်။ အခု အဲဒီအတွေးအခေါ်တွေ မှားယွင်းတယ်လို့ ကျနော့်ဘာသာ ယူဆတဲ့အတွက် မကျင့်သုံးတော့တာပါ။ "
ဒါကလဲ မထူးဆန်းလှပါ ကိုပေါရဲ့ လက်ရှိအတွေးအခေါ်တွေက လူဆယ်ဦးမှာ ကိုးဦး လောက် ကျင့် သုံးနေတာပါ ဝေဖန်ရင် ဝေဖန် မဟုတ်ရင် ဖာသိဖာသာနေ ကျတော် လဲ အဲဒီ ကိုးဦးမှာ ပါ ဒါ ပေါ့
တိုင်းပြည် လိုအပ်တာ က ဦးကျော်သူ လို ဇေယျာ့သော် လို ရှေ့နေကိုဖိုးဖြူ လို မဖြူဖြူသင်း လို ဒေါ်ရှူလို လူတွေပါ
တကယ်တမ်း စိတ်ရင်း အမှန် ဆိုရင် ပြည်သူ့အသံ အဖြစ် ဒေါ်စုထံ တိုက် ရိုက် ပြောသင့်ပါတယ်
ဘာလိုလဲ ဆိုတော့ ကျတော်လို အမှိုက် က လွဲလို့ ဒီလို မထင်မရှား ဘလော့ ကို ဒေါ်စု ရောတခြား ထင်ရှား တဲ့ သူများ လာ ဖတ်မှာ မ ဟုတ်လို့ပါ
Time discovers truth no matter what :)
ကုိုယ့်ကုိုယ်ကုို တန်ဘုိုးထားပါ မိတ်ဆွေရယ် :-)
I think U Win Tin isaclueless old man, from whose mistakes Daw Su is now trying hard to redeem the NLD and democratic movement.
I like U Win Tin asaperson but
I think his past strategies when
Daw Su were locked up were out
of date. Now Iam happy as Daw Su can lead us out of the shit hole together with PM U Thein Sein.
Well I do not know who you are worshipping but when you havealeader you have to trust her or
him. Daw Su's source of legitimacy
is our support, ordinary Burmese,
not suckers who got pay checks from NGOs, who are living as bums
in third nations,not cronies who
made money using relationships
with power abusing officials.
Now you are eroding her power base
that made me waste my time to give shit to you.
You are undermining my leader.
ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုပေါ ရေးသားရဲ ဝေဖန်ရဲတာကို သဘောကျပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီဆိုတာ သူရဲကောင်း ကိုးကွယ်တဲ့ ဝါဒ မဟုတ်ဘူး။ ပြင်ပလောကဟာ ideal မဟုတ်ပေမယ့် အပေးအယူ အလျော့အတင်း လုပ်လို့ရတဲ့အထဲမှာ ကိုယ်ကျင့်တရား နဲ့ ရိုးသားပွင့်လင်းမှု ဆိုတဲ့ တန်ဖိုးတွေ မပါဘူးလို့ ကျွန်တော်လည်း ခံယူထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခု အချိန် အထိတော့ အန်တီ့ကို အကြည်အညို မပျက်မိပါဘူး။ လေးစားဆဲပါ။
"ဒီမိုကရေစီဆိုတာ သူရဲကောင်း ကိုးကွယ်တဲ့ ဝါဒ မဟုတ်ဘူး။"
"ဝါဒ" is "-ism" in English, that
isadoctrine, religion, concept people subscribe to, believe in.
"ကရေစီ" is "-cracy", governance
system, that is how people will elect their government and how
should they govern them.
So to havea"ဒီမိုကရေစီ" system, citizens need to understand how politics work, how power is lost
and gain. This case, critisizing
what leader doing is denouncing
the leader and either be it in negotiations, deal making, war
or politics, you re-inforce your leader's position. You discuss
and debate before you reach to that stage but once you reach there, you give only one voice
and you fight to the bitter end.
What Daw Su doing is great, she
is doing her best with limited
man power available to around
her and her power base is not
those who are close to her but
us. So what this blogger has
written is alikeadeserter
crying for peace when leader
decided that it is time to
charge ahead. Now this is time
we show our support behind her
and show the hard liner who are
against her working with PM
U Thein Sein that she is not
a spent (political) force.
This also shows she understands Burmese now. Had U Thein Sein
been acting with good will, if
there are some hard liners who
are against he and his mates
working with Daw Su, this is
time to show them that he is
doing right thing by dealing
with Daw Su. I do not see any
problem for two Burmese working together.
If you are working for yourself
in overseas (like me) is fine.
But dont act likeafool crying
for peace when you need to run
and shoot, what you are doing
is demoralizing for others.
Not even in war but even onamerchant marine foreign going
ship such act (called mutiny)
lead to solitary confinement
or even execution on the spot.
ဆွေးနွေးသမျှ အရာရာကို အားလုံးသိအောင် ဖွင့်ချဖို့ က အခက်အခဲရှိပါတယ်။ လိပ်ခဲတည်းလည်း ဖြစ်နေတဲ့ ညှိလက်စ ကိစ္စရပ်တွေဟာ ဖွင့်ချလိုက်ရင် ဆက်ဆွေးနွေးဖို့လမ်းပိတ်သွားပါလိမ့်မယ်။ အခုလို ဒေါ်စု လုပ်နေတာတွေကို စိတ်ပူမိပေမယ့်၊ လူစွမ်းကောင်း လုပ်နေတယ်လို့ တော့ မမြင်မိပါဘူး ။ ပြည်တွင်းက အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကို ပြည်တွင်းကလူတွေက အသိဆုံးပါ။ ပြည်သူတွေအတွက် အထိအခိုက်အနည်းဆုံး နည်းလမ်းနဲ့တိုင်းပြည်ကို ပြောင်းလဲစေချင်လို့ဒေါ်စု ဒီလို လုပ်နေတာလို့ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒီလို ယုံကြည် အားပေးနေတဲ့ ပြည်သူပေါင်းများစွာ ဒေါ်စုနောက်မှာ ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုလဲ လက်ခံပေးရပါလိမ့်မယ်။ ကိုပေါ အနေနဲ့ဒေါ်စုကို လူစွမ်းကောင်းလုပ်တယ် တွေ ဘာတွေ ဝေဖန်နေမယ့်အစား၊ ကိုပေါမှာ သီးခြားလမ်းစဉ် ရှိရင်လဲ ရေးပြပါဦး။ ( ပင်နီဆူလာမှာ အင်္ကျီ အနီဝတ်ပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်တာမျိုးလောက်တော့ ထည့်မပြောနဲ့ ပေါ့ ) ဖြစ်နိုင်ရင် ကိုပေါ ကိုလဲ လူစွမ်းကောင်း လုပ်စေချင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ နိုင်ငံအတွက် လူစွမ်းကောင်းတွေ အများကြီး လိုအပ်နေလို့ ပါ။
ဒီမိုကရေစီတွေ၊ လူ့အခွင့်အရေးတွေ အကြောင်းမပြောခင် ယဉ်ကျေးမှုကို ပြောင်းဖို့လိုတယ်။
ယဉ်ကျေးမှု တော်လှန်ရေးလုပ်မလား။ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှု လုပ်မလား။ Revolution or Evolution ?
Evolution လုပ်တာဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာအတွက် အကျိုးရှိမယ်။ ဗမာ့ယဉ်ကျေးမှုကို လုံးလုံးထားခဲ့ဖို့ လိုတဲ့အတွက် ဘာသာပျောက်မသွားရအောင် ဘာသာကို ပူးသတ်နေတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကို ဗုဒ္ဓဘာသာကနေ ခွဲထုတ်ရမယ်။
ဒါကြောင့် ယဉ်ကျေးမှု တော်လှန်ရေးကို မြန်မာပြည်မှာ မဖြစ်စေချင်ဘူး။ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှု ဖြစ်စဉ်ပဲ ဖြစ်စေချင်တယ်။
ယဉ်ကျေးမှု ပြောင်းပြီးမှ ဒီမိုကရေစီစကား စပြော။ တရုတ်ကိုကြည့်၊ ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေးပြီးမှ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်မှာ တိုးတက်လာတယ်။ bottom-up culture revolution.
ယိုးဒယားကိုကြည့်၊ ချူလာလောင်းကောင်းက ယဉ်ကျေးမှု ဆင့်ကဲပြောင်းလဲစေပြီးမှ top-down culture evolution ယိုးဒယားဟာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကို ရှောင်၊ အာရှကျားတွေထဲက တစ်ကောင်ဖြစ်ရတယ်။
ဂျပန်ကိုကြည့်၊ မီဂျီတော်လှန်ရေးမှာ ယဉ်ကျေးမှု ပြောင်းခဲ့ပြီး another top-down culture evolution ပြီးမှ ရုရှကို ၁၉၀၆ မှာ စစ်နိုင်တယ်။ ပထမကမ္ဘာစစ်မှာ ကိုလိုနီ ဝေစု ရတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင် လေယာဉ်တင်သင်္ဘောဆောက်နိုင်တယ်။
ဒီယဉ်ကျေးမှု တော်လှန်ရေးလိုတဲ့ ကိစ္စကို လောရှည် ပြောနေတာ ၁၀ နှစ်ရှိပြီ။
အောင်ဆန်းစုကြည်က အခုမှ နားလည်တယ်။ ကိုပေါလို ဘလော့ဂ်ဂါက ခုထိနားမလည်ဘူးဆိုတော့ စိတ်မကောင်းဘူး။
ဘုရားကိုတောင် တိတ်ထိတွေ ဝေဖန်သေးတာပဲ၊ ဒေါ်စုကို ကိုပေါဝေဖန်တာ မဆန်းပါဘူး ... ဒါပေမဲ့ ဝေဖန်တာ သိပ်စောနေသေးတယ်။ ဝေဖန်မိတာ မှားပြီဆိုတဲ့ အချိန် ပြန်တောင်းပန်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းလေးတော့ ရှိပါစေပေါ့ဗျာ။
Before you talk about culture,look at yourself first. If you born in Burma from Burmese parents,everyone knows it is EXTREMELY rude to address in such way you use. You are burmese,not American or British to use without proper initials to address someone who is in your mother's or grandmothers' age. Let alone their status first.
I do not like culturally backward or conservative ideas myself,but for educated persons there are protocols everywhere whether they are de facto or de jure if you know what I means.
Otherwise forget about it and you just showing publicly your 'genes'.
Initials, in my opinion, are not needed.
Though not first priority, after the "culture revolution", they will also be gone.
Except "Buddhism" (this is not culture/tradition element, this isareligion), everything we call culture/tradition should be gone -- only sooner or later -- to make the worldabetter place.
ဘာကြောင့်များ ကိုပေါရယ့် လွတ်လပ်စွာပြောဆို ပိုင်ခွင့်ကို ထိခိုက်နေကြသလဲဗျာ။ ကိုပေါအနေနဲ့ တောလျှောက်သူ့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကို ရေးသားနေခဲ့တာပဲ။ မနေ့တစ်နေ့ကမှ ထူးထူးခြားခြား တစ်ရေးနိုးထတာမှ မဟုတ်ပဲဗျာ။ အမြင်မတူတာတွေကို ပြောနိုင်ပေမယ့် ပြောရပါ့မလားဆိုပြီး ပြောဆိုပိုင်ခွင့်ဆိုတယ့် အခွင့်အရေးတစ်ရပ်ကို ပိတ်ပင်ဖို့ကြိုးစားနေတာတော့ မကောင်းပါဘူးဗျာ။ ကိုပေါလဲ ရေးစရာတွေကို ရေးသာရေးပါဗျာ။ ကျနော်တို့လဲ ဖတ်ရတော့ မတူညီတယ့် ရှုထောင့်ကနေမြင်ရတယ့်သဘောပေါ့။
ကိုပေါကိုဝေဖန်မယ့် သူတွေလဲ “ငါကွ အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်ဖို့လုပ်နေတာ ငါ့ကို အာလာမခံနဲ့” ဆိုတာမျိုးတော့ မဖြစ်စေနဲ့ပေါ့။ ၀ိရောဓိ (paradox) ဖြစ်နေတယ်ပြောရမယ်ထင်တယ်။ အာဏာရှင်စံနစ်ကို မကြိုက်ကြဘူးဆိုပေမယ့် အာဏာရှင်ဖြစ်စေမယ့် အကြောင်းတွေကို နှစ်သက်လက်ခံနေကြသလိုဖြစ်နေလို့ပါ။ အာဏာရှင်စနစ်ကို ဖြစ်ထွန်းစေမယ့် အကြောင်းကို နှစ်သက်လက်ခံတယ်ဆိုရင်တော့ အာဏာရှင်စနစ်ဆိုတယ့် အကျိုးဆက်ကိုလဲ သိရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ ဝေဖန်ဆန်းစစ်ခြင်း ထောက်ပြပြောဆိုခြင်း တွေဟာ အာဏာရှင်စနစ်ကိုဖြစ်ထွန်းစေတယ့် အကြောင်းတရားတွေကို အားနည်းစေတယ်ဆိုတာ အားလုံးလက်ခံထားမယ်ထင်ပါတယ်။
ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေးတော့ မသိပါဘူးဗျာ ကိုပေါကတော့ တစ်ခါသားမှာ အတော်လှန်ကောင်းလို့ ကိုပေါသမီးလေးတောင် မဆိုင်ပဲ ပါလိုက်ရသေးတာ
Too strongameat without sauces to soothe delicate stomachs. Apart from comments about U Win Tin, it is largelyafair criticism.
ကိုပေါ နဲ့ မငယ်နိုင် ဆွေးနွေးထားတဲ့အောက်မှာ သွားပြီး ကိုပေါဖက်ကနေ ဆွေးနွေးမိတာ
Funny u still dont know abt ငယ်နိုင်,
nobody want discuss with her bcos
anyone who visit blogs knows she's suchatwat.
အလုပ်ကပြန်ရောက်ချင်း ဘလော့ဂ်ကို ကြည့်လိုက်တော့ ကိုပေါဘလော့ဂ်ကနေ ၀င်တဲ့သူတော်တော်များနေတာ့ တွေ့လို့ ခြေရာခံ လိုက်လာမိတာနဲ့ ဒီနေရာကို ရောက်လာပါတယ်။
အပေါ်မှာ ဂုန်းတိုက်ထားတဲ့ Anonymous (September 17, 2011 4:21 AM) နဲ့ အတင်းပြောထားတဲ့ Anonymous (September 17, 2011 5:38 PM) ကတယောက်တည်းလို့ ယူဆရပါတယ်။ ဘယ်လိုနားလည်ရမလဲမသိဘူး စိတ်ညစ်တယ်လို့ ဂုန်းတိုက်ချင်လိုဇောနဲ့ ကိုပေါကို မဟုတ်တာလာပြောပြီး လာတိုင်ထားလို့ မေးလ်နဲ့ အကျိုးအကြောင်းပြော အသိပေးပြီးမှ ဖျက်လိုက်တဲ့ မှတ်ချက်ကို ဒီမှာတခါ မူရင်းအတိုင်း ပြန်ကူးပြီး ပြန်ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကိုပေါဘက်ကနေပြီး ဆွေးနွေးတယ်ဆိုတဲ့ ဆွေးနွေးထားတဲ့စာ တကြောင်းမှ မတွေ့ရတဲ့ မှတ်ချက်ကို ကော်ပီကူးပြီး မေးလ်နဲ့ ပြန်ပို့ထားတာကို အောက်က ကွင်းစကွင်းပိတ်ထဲမှာ မူရင်းအတိုင်းထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အီးမေးလ်ရဲ့ ခေါင်းစဉ်ကိုတော့ သိက္ခာ ရှိစေချင်လို့ သိက္ခာရှိပါစေ ဆိုပြီး ရေးလိုက်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရင် မဟုတ်တာပြောခြင်းနဲ့၊ ဂုန်းတိုက်ခြင်းကြောင့် ရတဲ့အပြစ်ကို ဘုန်းကြီးတပါးပါးနဲ့ ဂုန်းတိုက်သမား ကျွန်မဆီမှာ ရေးတဲ့ အမည် thatoe.thuzara. (ခေါ်) ဒီမှာရေးတဲ့ Anonymous (September 17, 2011 4:21 AM) ကို အကြံပြုရင်း ကျွန်မကို နားမလည်လို့ စိတ်ညစ်နေတယ်ဆိုလို့ အောက်မှာ ကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့မှတ်ချက်နဲ့ ကျွန်မအကြောင်းပြန်တဲ့ အီးမေးလ်ကို စိတ်ညစ်ပြေသွားအောင် သေသေချာချာ ပြန်ဖတ်လိုက်ပါလို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
everyone know you not only bark at ur own blog,but also sniffing n following to others.
ကျွန်မဘလော့ဂ်မှာ ဘုရားသီချင်းတွေ ဘုရားပုံတွေ တင်ထားတာနဲ့ စစ်ခွေးကို စစ်ခွေးလို့ ပြောတာ
Too noisy of barking and bark backs.
Shoo Shoo !!!!
ဒေါက်တာလှိုင်မြင့် တစ်ခါ ပြောဖူးတယ်ဗျ
မငယ်နိုင်ကို ဝဋ်နာကံနာ တဲ့